Daafacii hore ee Man United, Patrice Evra oo laacib ka tirsan Kooxda Liverpool ku tilmaamay xiddigii ugu adkaa ee uu ka horyimid – Gool FM
(Yurub) 22 Okt 2019. Patrice Evra oo daafaca uga dheeli jiray kooxda Manchester United ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka kooxda Liverpool ee James Milner uu yahay xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka horyimid waayihiisa ciyaareed.
Xiddigan reer France kaasoo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta bishii July ayaa waqti wacan ku soo qaatay kubadda cagta isagoo ku guuleystay shan horyaalka Premier League iyo hal Champions League siddeed sanadood iyo bar uu ku sugnaa garoonka Old Trafford.
Evra oo qeyb ka ahaa kooxda uu maamulayey macallin Sir Alex Ferguson ee Man United ayaa sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha AS Monaco, Juvnetus, Marseille iyo West Ham taasoo u saamaxday inuu ka horyimaado xiddigaha ugu fiican adduunka.
Isagoo ka qeyb galayey barnaamijka Monday Night Football ee ka baxa Sky Sports ayaa la weydiiyey Evra inuu magacaabo xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka horyimid, waxaana uu yiri: “Waa James Milner, sababtoo ah aad ayuu ii jahwareerin jiray.
“Waxaan ahaa daafac weerartami jiray, waxaana uu ii raaci jiray meel walba, waxa uu igula xafiiltami jiray xitaa kubadaha madaxa.” ayuu Evra raaciyey hadalkiisa.
“Mararka qaarkood waxaan ku dhihi jiray ‘bax iga tag oo weerar aad, aniga faraha iga qaad!’, markii aan ciyaarayay kulamada Manchester Derby waan iska horimaan jirnay, kaddib waxa uu aaday Liverpool haddana sidii oo kale ayuu sameyn jiray, aniga ahaan mid sida weyn ii jahwareeriyay waxa uu ahaa James Milner.”
Intaas kaddib waxaa Evra la weydiiyey sababta uusan uga dhigin jawaabtiisa laacibka shanta goor ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ee Lionel Messi kan ugu adkaa ee uu ka hor yimid.
38-sano jirkaan ayaana markaas sheegay inuu wax badan ka horyimid Lionel Messi, balse uusan dhihi karin inay sahlan tahay in la raacdo, laakiin waxa uu xusay inuu isaga maareyn karay marka uu garabka saaran yahay, balse marka aan Leo waxba laga qaban karin oo uu halista ugu badan abuuri karo ay tahay marka uu dhexda galo markaasoo uu sheegay inuu bidix iyo midig midkuu doono kaa mari karo.